डाक्टरको लाइसेन्स परीक्षा : फेल भएका नै जाँच्छन् बिरामी ! – ejhajhalko.com
डाक्टरको लाइसेन्स परीक्षा : फेल भएका नै जाँच्छन् बिरामी !
१७ माघ २०७४, बुधबार ०२:५३ 123 पटक हेरिएको
‘काउन्सिलको लाइसेन्स परीक्षा पास नगरी चिकित्सा अभ्यास गर्नु गैरकानुनी हो, यस्ता व्यक्तिलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ,’ नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यस्ता चिकित्सकबारे उजुरी आयो भने खोजबिन गरी कारबाही हुन्छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा यो खबर छ ।